HomeWararka CiyaarahaManchester United oo ku biirtay tartanka loogu jiro Dusan Vlahovic.
November 25, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa kusoo biirtay ugaarsiga loogu jiro Xidiga Fiorentina ee Dusan Vlahovic .
21 jirkaan ayaa dhaliyay 12 gool 14 kulan oo uu u saftay kooxdiisa talyaaniga intii lagu jiray ololaha 2021-22, kooxo badan oo ay ku jiraan Newcastle United , Juventus , Arsenal , Tottenham Hotspur iyo Manchester City ayaa la rumeysan yahay inay xiiseynayaan. adeegyadiisa.
Fiorentina uma badna inay fasaxaan bisha Janaayo laakiin waxaa lagu qasbi karaa inay iibiso xagaaga soo aadan, maadaama uu qandaraaska weeraryahanka uu dhacayo June 2023, ilaa iyo haatan ma uusan diidin fursad uu ku saxiixo heshiis kordhin.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , Man United ayaa daawaneysay xiddiga heerka caalami ee dalka Serbia xilli ciyaareedkan, waxaana ay si adag ugu jiraan tartanka saxiixiisa sanadka soo socda.
Red Devils ayaa la filayaa inay bartilmaameed ka dhigto weeraryahan cusub sanadka 2022, iyadoo Edinson Cavani iyo Anthony Martial ay u badan tahay inay ka tagaan kooxda dhamaadka xilli ciyaareedka 2021-22.
Vlahovic ayaa dhaliyay 41 gool 98 kulan oo uu u saftay Fiorentina tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Partizan bishii Luulyo 2018.